Fampiharana sary ho an'ny vao manomboka
Tsy mila mandao Photoshop na rindrambaiko sary hafa intsony ianao mba hanaovana ny filanao fanovana rehetra. Azonao atao ny manova sary maimaimpoana avy amin'ny solosainao. Manomboha amin'ny Photo Editor for Free amin'ny alàlan'ny fanokafana kaonty miaraka amin'i Pixlr, ilay Online Photo Editor. Hiaina fanitsiana sary manan-tsaina amin'ny sehatra manaraka miaraka amin'ny fitaovana entin'ny AI ho an'ny fanovana haingana nefa marina.
Photoscape dia rindrambaiko vaovao matanjaka avy amin'ny Adobe izay manambatra ny haitao sarotra amin'ny fampiasana mora ampiasaina. Atambaro amina toerana iray ny sary marobe, ampio effets, ary asehoy ny sarinao toy ny hoe nalaina ny iray andro teo aloha izy ireo niaraka tamin'ny safidy fanodinana batch natolotry ny Photoscape. Ny Photoscape dia mety indrindra ho an'ny olona miasa samirery, tsy manana traikefa kely amin'ny fanovana sary, na kivy noho ny tsy fahaiza-manao sy ny olana mifandraika amin'ireo tonian-dahatsoratra taloha. Amin'ny Photoscape, azonao atao ny mizara ny asanao amin'ny fianakavianao sy ny namanao ary hahafantatra fa hampiseho ny asanao tsara indrindra izy ireo. Ity fampiharana ity dia iray amin'ireo fampiharana fanovana sy famoahana sary tsara indrindra misy.
Ny tsara indrindra dia maimaimpoana ny Photoscape! Tsy ilaina ny fampidinana. Miaraka amin'ireo endri-javatra mahery vaika sy mahasoa, Photoscape dia safidy lehibe ho an'ny olona mitady programa fanovana sary tsotra nefa mahery. Manome izay rehetra antenainao ao anaty tonian-dahatsoratry ny sary feno, miaraka amin'ny tombony fanampiny amin'ny fahafahanao mitahiry sary mivantana any amin'ny kapila mafy ataonao, ary ny fahazoana mampiasa fitaovana famoronana maro karazana. Ho an'ireo izay te-hamokatra bebe kokoa aza, ny endrika tsara indrindra amin'ny Photoscape dia ny fitaovany fanovana mahaliana, izay ahafahanao manararaotra tsara ny sarinao.
Na dia mety ho lasa fanazarana aza ny fanararaotana feno ny sarin'ny olona iray amin'ny Photoscape dia cinch ihany. Iray amin'ireo fiasa tsara indrindra sy manampy indrindra amin'ny Photoscape ny fahafahany mizara ny asanao amin'ny alàlan'ny galeriana an-tserasera, izay mahatonga ny fampakaranao sy fizarana ny sarinao ho mora sy haingana. Ahitana tranomboky fitaovana sy fampianarana mahaliana koa ilay fampiharana, izay hanampy anao ho mpaka sary mamorona kokoa. Raha mitady tonian-dahatsoratry ny sary tsara ianao nefa tsy fantatra hoe aiza no hanombohana, jereo ity famerenana haingana sy mora ny Photoscape ity.
Azo alaina maimaim-poana, Fotor dia programa fanovana sary tsara hafa. Miavaka ny motera satria mamela anao hanao fanovana maro araka izay tadiavinao amin'ny sary iray ianao ary avy eo manonona ny fanovana nataonao. Misy sivana sary mahasoa maromaro azo alaina, toy ny famelana anao hanazava, hangeja, hanala ny maso mena ary hanitsy ny loko sy ny fifanoherana.
Vaovao ihany ny motera fa nanjary nalaza be tamin'ireo mpitia haino aman-jery sosialy. Noho ny fiasa fanovana sary mora azy dia ampiasaina matetika i Fotor hamoronana collage. Ny iray amin'ireo zavatra mahafinaritra amin'ny fampiasana Fotor hanaovana collage dia ny ahafahanao manondrana ny collage vitao amin'ny endrika maro samihafa, ao anatin'izany ny PDF sy ny JPEG. Miaraka amin'ireo fisehon'ireo mpanamboatra collage miavaka, mahatonga an'i Fotor mamorona rivotra malefaka miavaka sy manokana.
Raha mila zavatra somary mandroso kokoa ianao noho ireo mpanonta sary telo maimaimpoana etsy ambony, dia mety ho liana amin'ny Acrosage ianao. Tsy toy ny ankamaroan'ny mpamoaka sary maimaimpoana hafa, ny Acrosage dia mihoatra ny lafin-javatra fanovana ifotony mba hampidirina ireo fiasa ahafahanao mamerina mamorona sy manaingo ny sarinao aorian'ny nakana azy ireo. Ny endri-javatra dia ahitana andiana sivana, mpitantana sosona ary tranomboky sary. Ny zavatra tsara momba ny fampiasana Acrosage dia ny fananana sivana an-jatony azo alaina, ka mora kokoa ny manampy effets fanampiny amin'ny sarinao. Azonao atao ihany koa ny mamonjy ny sarinao amin'ny endrika fisie isan-karazany, arakaraka ny endrika ilainao (JPEG, Raw, na TIFF).
Ho an'ireo vao manomboka, ireto no telo amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fanitsiana sary any. Rehefa avy nanao fanazaran-tena tamin'ny iray amin'ireo fandaharana etsy ambony ianao dia diniho ny fampiasana ilay tsara indrindra ho an'ny zavatra ilainao. Ny valiny farany dia ho asan'ny zavakanto, azo tanterahina amin'ny fahaizanao mamorona sy ireo fitaovana nomen'ny rindrambaiko anao. Misy fitaovana hafa izay tsara ho an'ny vao manomboka ihany koa, ary raha te haka izany ianao, dia afaka mividy iray amin'ireo programa fanovana sary matihanina tsara indrindra eny an-tsena. Na inona na inona fanapahan-kevitra horaisinao amin'ny farany, ny safidy tsara dia hanome valiny maharitra anao.